Sawirro: Deni oo kulan xasaasi ah la qaatay ururada bulshada rayidka ah | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sawirro: Deni oo kulan xasaasi ah la qaatay ururada bulshada rayidka ah
Sawirro: Deni oo kulan xasaasi ah la qaatay ururada bulshada rayidka ah
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay kulan la qaatay Ururada Bulshada, Madaxda Ururada Siyaasadda, Aqoonyahanada iyo Waxgaradka Puntland.
Deni ayaa Bulshada uga warbixiyey xaaladda guud ee Puntland, shaqooyinka dowliga ah ee laqabtay sida tayeynta Ciidamada, horumarinta hanaanka maaliyadda iyo hirgelinta Nidaamka Xisbiyada badan oo meel wanaagsan maraya .
Madaxda Ururada Siyaasada Puntland oo kulanka ka hadlay, waxay Madaxweynaha uga mahadceliyeen ka dhabeynta nidaamka Dimuqraadiyadda Puntland, oo caawa ay afkaartooda iyo talooyinkooda kusoo gudbinayaan iyaga oo metelaya Ururada Siyaasadeed ee Puntland .
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa u mahadceliyay dhammaan xubnaha kulanka kasoo qeybgalay, si gaar ah wuxuu Madaxweynuhu bogaadiyey doorka Ururada Bulshada Rayidka ah ku leeyihiin Dowladdnimada, iyo sida ay marwalbo uga qeyb qaataan marxalad kasta oo markaasi la marayo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Maqaal horeQoor-Qoor oo magacaabay Gudoomiyaha Maxkamada sare ee Galmudug
Maqaal XigaMuxuu Axmed Madoobe u magacaabi la’yahay golihiisa wasiirada?